Football Khabar » बार्सिलोना सोसिडाडसँग बराबरीमा रोकियो : रियल मड्रिडलाई फाइदा !
बार्सिलोना सोसिडाडसँग बराबरीमा रोकियो : रियल मड्रिडलाई फाइदा !
स्पेनिस ला लिगामा सिजनको पहिलो इएल क्लासिको खेल्नुअघि बार्सिलोना बराबरीमा रोकिएको छ । शनिबार भएको खेलमा रियल सोसिडाडले बार्सिलोनालाई आफ्नो घरमा २–२ को बराबरीमा रोकेको हो । यससँगै बार्सिलोना बराबरीमा रोकिँदाको फाइदा रियल मड्रिडलाई पुग्ने भएको छ ।
आफ्नो घरमा सोसिडाडले खेलको १२औं मिनेटमा पेनाल्टी गोलमार्फत् अग्रता लिएको थियो । बक्समा बार्सिलोनाका सर्जियो बुस्केट्सले सोसिडाडका खेलाडीलाई आकासे बल लिनेक्रममा तानेर रोकेपछि रेफ्रीले भिएआरको मदतमा सोसिडाडलाई पेनाल्टीको मौका दिएका थिए ।
जसमा मिकेल ओएरजाबालले सहजै गोल गरे । तर, बार्सिलोनाले बराबरी गोल फर्कायो । खेलको ३८औं मिनेटमा लुइस स्वारेजको पासमा ग्रीजम्यानले चलाखीपूर्वक चिप प्रहारमा गोल गरेपछि पहिलो हाफ १–१ मा टुंगियो ।
दोस्रो हाफ सुरु हुनासाथ बार्सिलोनाले खेलमा अग्रता बनायो । कप्तान लिओनल मेस्सीको पासमा लुइस स्वारेजले गोल गरेर खेल १–२ बनाएका थिए । तर, सोसिडाड केहीबेरमै खेलमा फर्कियो ।
६२औं मिनेटमा सोसिडाडका लागि एलेक्सान्डर इशाकले गोल गरेर टिमलाई खेलमा फर्काए । उनले बार्सिलोनाका गोलकिपरबाट रिबाउन्ड भएर आएको बलमा सहजै गोल गरेपछि खेल बराबरीमा आयो । त्यसपछि बाँकी समयमा दुवै पक्षबाट थप गोल नभएपछि खेल २–२ मा सकियो ।
अब यो बराबरीपछि बार्सिलोनाले १६ खेलबाट ३५ अंक बनाएको छ । बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ । तर, आइतबार रियल मड्रिडले आफ्नो खेल जिते ऊ बार्सिलोनालाई पछि पार्दै लिग लिडर बन्नेछ । यता, बार्सिलोनालाई बराबरीमा रोकेको सोसिडाडको खातामा २८ अंक छ ।
प्रकाशित मिति २८ मंसिर २०७६, शनिबार २२:३४